दाजुभाइको मिलेमतोमा १५ करोड हिनामिना, फेक अकाउन्ट बनाएर रकम ट्रान्सफर ! – Dainik Sangalo
दाजुभाइको मिलेमतोमा १५ करोड हिनामिना, फेक अकाउन्ट बनाएर रकम ट्रान्सफर !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष १३, २०७८ समय: १७:२२:०८
सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकको कर्पोरेट कार्यालय विराटनगरमा उच्च ओहदामा बसेका कर्मचारीको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको घोटाला भएको खुलेको छ । बैंकका सिइओ नवीन सुवेदी र रेमिट शाखाका प्रमुख हिमाल भट्टराईको मिलेमतोमा १५ करोड ७० लाख भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको पाइएको हो । प्रमुख भट्टराई, बैंकका सिइओ सुवेदीका फुपूका छोरा हुन् ।
बैंकको कर्पोरेट कार्यालयका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट (जीएसडी) प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई मोरङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने सुवेदीमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूमाथि विगत ६ वर्षदेखि ‘फर्जी’ कारोबार बनाएर रेमिटेन्सको १५ करोड ७० लाख रकम नक्कली खाता सिर्जना गरेर ट्रान्सफर गरेको आरोप छ ।
लामो समयदेखि हिनामिना भइरहेको भएपनि हालैमात्र बैङ्ककै एक कर्मचारीले गोप्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आर्थिक हिनामिना भइरहेकोबारे उजुरी गरेका थिए । उनको उजुरीपछि मङ्सिर पहिलो साता बैङ्कको रकम हिनामिना भएको खुलेको हो । उजुरीपछि नै प्रहरीले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउ परेका भट्टराईले २०७१ सालदेखि बैंकको रेमिटेन्सतर्फ जिएसडि प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । बैंकमा आर्थिक अनियमितता भएको विषय बाहिरिएपछि सञ्चालक समितिले बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तारानाथ निरौलालाई समेत हटाएको थियो । १ मंसिरदेखि डाक्टर अर्जुन बराललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
यता, आरोपित भट्टराईका आफन्तले सिईओ नवीन सुवेदीको योजनामा बैङ्क घोटाला भएको दाबी गरेका छन् । भट्टराईलाई मात्रै पक्राउ गरेको भन्दै हिमालका आफन्तले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सिइओ सुवेदीकै योजनामा हिनामिना भएको दाबी गरेका थिए । रेमिट शाखाबाट भएको अपचलनमा बबिता सुवेदीको नाममा १४ करोडभन्दा बढी रकम ट्रान्सफर भएको राष्ट्र बैङ्कमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । उनी सिइओ सुवेदीको नाताले बहिनी पर्छिन् ।
सन् २०१६ देखि २०२१ अगस्ट २ तारिखसम्ममा बबिताको नाममा रहेको प्राइम बैङ्कको खाता नं. ९९९००००१५००१५ बाट १४ करोड गएको राष्ट्र बैङ्कमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । बबिताको नाममा फर्जी खाता सिईओ सुवेदी र भट्टराईले मिलेर खोलेको आरोप लागेको छ । यस्तै, हिमाल भट्टराईको विभिन्न पाँचवटा बैङ्कको खातामा एक करोड रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख छ ।
भट्टराईले कर्सिया, टङ्की, केराबारी, शनिश्चरे, सौंठा, गछिया शाखा कार्यालयका रेमिट्यान्स बैङ्क खाताबाट आफ्नो युजर आइडीबाटै ‘ट्रान्जेक्सन पोष्ट’ गरी आफ्नै बचत खाता र चल्ती खातामा जर्नल ट्रान्जेक्सनलाई ‘क्यास डिप सेल्फ’ भनी लेख्ने गरेका थिए । ‘भट्टराईले बैङ्कले दिएको कर्मचारी सापटी कर्जा आफ्नो खातामा सापटी कर्जा रिपेमेन्ट गरेको भनी नक्कली ट्रान्जेक्सन देखाएर मोबाइल बैङ्किङमार्फत सोझै अरूको खातामा रकम पठाएर अहिलेसम्म एक करोडभन्दा माथि गैरकानुनी ढङ्गबाट निकालेका छन्,’ राष्ट्र बैङ्कमा परेको उजुरीमा भनिएको छ ।
भगवती सुवेदी (सिइओ सुवेदीकी भाउजु), साजन पोखरेल (सिइओको सालो), बानी पोखरेल (सिइओकी जेठीसासु) लगायतका खातामा रकम पठाएको उजुरीमा उल्लेख छ । बैङ्कले उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रहरी मोरङले भट्टराईलाई मङ्सिर १९ मा नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ । कराडौँ हिनामिनामा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नवीन सुवेदीसहित पाँच जना कर्मचारीहरू पनि शङ्काको घेरामा परेका छन् ।
बैङ्कका सिइओ सुवेदी, लेखा बित्त प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी, कर्जा प्रमुख विदुर पोखरेल, आइटी प्रमुख शशाङ्क पोखरेल र अपरेसन प्रमुख अमित थापामगरको भूमिका शङ्कास्पद भएकाले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । बैङ्कका कर्जा प्रमुख विदुर पोखरेल र आइटी प्रमुख शशाङ्क पोखरेल सिइओ सुवेदीका मामाका छोरा हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकको केन्द्रीय कार्यालय धनकुटामा छ । बैंकको प्रदेश १ भरिमा ३६ वटा शाखा कार्यालय छन् । बैंकको चार अर्ब ३० करोड निक्षेप छ । काबेली विकास बैक र सप्तकोसीबीच मर्ज भएको थियो ।
Last Updated on: December 28th, 2021 at 5:22 pm